सामान्य टिप्पणिहरु | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
यहाँ छ जहाँ तपाइँ यस साइट, डुङ्गाहरू, मोटर्सहरू, माछाहरू, र अन्य विषयहरूको बारेमा टिप्पणीहरू छोड्न सक्नुहुन्छ, वा केवल हेलो भन्नुहोस् र हामीलाई बताउनुहोस्। कृपया, कुनै राजनीतिक, चुम्बन, वा यस साइटको लागि उपयुक्त छैन। तपाईं हुनु पर्छ लग - इन तपाईं टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भने।
बुझाउने jwb.jw17 Wed, मा, 06 / 28 / 2017 - 15: 41
61 / 62 जनसन 3hp लिक
तपाईंलाई विशेषज्ञहरु द्वारा सहयोग चाहिन्छ। यो पुरानो इन्जिन चलिरहेको छ, मैले पुरानो 52-54 विनाशकारी पुस्तिकाबाट केहि चीजहरू फेला पारेको छ तर यसले यससँग के हुँदैछ के बारे केहि पनि छैन .यो पानीको बैरलमा यसलाई चलाउन पछि र त्यसपछि यसलाई भण्डार गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने- "संविधानसभाको म्याद थप्न सकेको छैन। के यो यहाँ आउनु पर्छ? र बन्द गर्नुभन्दा पहिले कार्ब ड्राई सुचारु गर्नेछ (पुरानो मैनुअल अनुसार) यो रोक्न? म यस इन्जिनको साथ नयाँ नौसिख हुँ र मद्दत आवश्यक छ ... साथै, म नि: शुल्क मेनुअल डाउनलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ... धन्यवाद जे बर्ट
बुझाउने ttravis Wed, मा, 06 / 28 / 2017 - 22: 04
जवाफ 61 / 62 जनसन 3hp लिक by jwb.jw17
पानी जस्तै टी सुनिन्छ ...
पानी एक लीक तेल छाप मार्फत आफ्नो तल्लो एकाइ तेल मा रही छ जस्तो सुनिन्छ। को powerhead तल कुनै ग्याँस, तर पानी / तेल फिर्ता बाहिर शायद लीक ग्याँस जस्तो देखिन्छ। यी कि ड्राइभशाफ्ट वरिपरि जाने रबर छाप छन्। यो replac गर्न सामान्य छ...थप हेर्नुहोस्
बुझाउने ttravis Wed, मा, 06 / 28 / 2017 - 22: 09
यहाँ भागहरु म को सूची छ ...
यहाँ म आफ्नो JW-17 लागि सँगै राख्न भाग, ड्राइभशाफ्ट तेल छाप सहित को सूची हो। http://outboard-boat-motor-repair.com/motors/Johnson%203.0%20HP%201961-…
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 00: 21
धन्यवाद ttravis। मलाई यकीन छ कि यो ग्यास हो जुन त्यहि हराएको रंग मेरो मिश्रित तेल र ग्याँस छ र यसले छिटो नीलो2स्ट्रोक तेल छोडेर छिटो हटाउँछ। मैले तपाईंको सम्पूर्ण पोष्ट केही अज्ञात कारणको लागि पढ्न सकेनौ..क्या तपाईं यसलाई ई-मेलमा प्रतिलिपि र टाँस्न सक्नुहुनेछ। म मा छु jeremy.w.bert@gmail.com । म जब म यसलाई केवल सापट को prop विधानसभा जडान जहाँ तल बाहिर आउँदै थियो सानो प्वाल stbd पक्ष याद म स्रोत पत्ता लगाउन सक्छ भने हेर्न तल्लो कफन बन्द लिएका थिए। यो नै प्रकट गर्न एकै रातमा लिए। अन्य कुनै पनि विचार? यो लगभग एक ओभरफ्लो कुरा जस्तै आफ्नो जस्तै देखिन्छ। म यो दुई पटक यस गरेको छ ... राम्रो चलिरहेको देखिन्छ दुवै वाल्व र बन्द निकास ... ??? thआगमनको लागि अंक ...
बुझाउने ttravis गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 09: 07
निश्चय छैन। यो हुन सक्छ ...
निश्चय छैन। यो पावरहेडबाट ड्राइभहाउसमा लीक गर्न सक्दछ। तपाईले पावरहेड बन्द गर्न आवश्यक छ कि हेर्न सक्दछ कि यो कहाँ हुन्छ। यदि तपाईंलाई आवश्यक संख्याको आवश्यक छ भने, मलाई थाहा दिनुहोस्, र म यो तपाईंको खोजी गर्न प्रयास गर्नेछु। म सबै पुरानो इन्जिनहरूका लागि भागहरू प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा छु, तर धुन-अप भागहरू पछि रङहरू र छापहरू आउँनेछन्। मैले ठूलो प्रश्न सोधेँ कि तपाई आफैलाई सोध्नु हुन्छ कि यो लीक छ र यो चिन्ताको मूल्य हो। मलाई लाग्छन कि यो सानो छोरोको लागी केहि चीजको पीडा छ। तपाईले iboats.com मा भएका व्यक्तिहरू सोध्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईले राम्रो उत्तर पाउन सक्नुहुनेछ।
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 12: 07
धन्यवाद USCG चिन्ता गर्न पर्याप्त लीक, ttravis
खैर, म बिहानै भेट्टाई कि बढी ग्याँस लियो। धेरै पानी तर पानीमा छाला राख्न पर्याप्त छैन! हामी डुङ्गा खानुहुन्छ / मिशन बे, स्यान डिएगोलाई गर्भपतनको भ्रमण गर्न र त्यहाँ कुनै पनि प्रदूषण बारेमा त्यहाँ धेरै पागल हुन्छ। कसैलाई तपाईंको आरवीबाट बाहिर राख्नु को लागि जहर छिपाउन को लागी रिपोर्ट गर्दछ किनकी एक गंदे पुरानो कोट (चकलेट माइन) एक जहरीला चींटी खा सक्छ !!! जब तपाईं "पावर टाउको" भन्नुहुन्छ म त्यसलाई लिन्छु, तपाइँले सम्पूर्ण स्टार्टर / ग्याँस ट्यांक र इग्जेशन विधानको अर्थ? जस्तो कि म गर्न चाहन्छु। म सोच्न थालेँ कि ग्याँस बन्द वाल्व लेकिरहेको छ। यो भित्ता बन्द भएपछि देखि रिसाव गर्न पर्याप्त हावा पुग्न ग्याँस ल्याउनको कारण वैक्यूमको लागि केहि समय लाग्छ। यसैले यो हरेक 24 घन्टा वा यति हुन्छ। मैले कार्बन बाहिरको ठाउँमा गीला देखिन्छु। के कार्बमा अतिप्रवाह प्रणाली छ जुन त्यो छेदमा टाढा छ? यो हुन सक्छ कि न केवल बन्द वाल्व लीक तर फ्लोट कटोरा मा वाटर वाल्व र सुई वाल्व पनि। ग्यास। म निश्चित रूप देखि कार्ब को पुनर्निर्माण गर्न जाँदैछु र म त्यो सील को बारे मा बताईएको त्यो सील को बदलेगी। म समुद्री समुद्री इन्जिन मा, या एक2स्ट्रोक मा कभी काम नहीं गरेको छ, तर मैले सफलतापूर्वक एक carb को सफलतापूर्वक अलग गरेको छ .. कुनै पनि सुझाव को सराहना गरिनेछ .. धन्यवाद ट्रैविस! जे बर्ट
बुझाउने ttravis गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 17: 46
जवाफ धन्यवाद USCG चिन्ता गर्न पर्याप्त लीक, ttravis by jwb.jw17
को powerhead एकदम सजिलो छ ...
पावरहेड हटाउन सजिलो छ। मैले यो मेरो 5.5 एचपी जॉनसन टुन-अप प्रोजेक्टमा गरें जुन तपाई यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: http://outboard-boat-motor-repair.com/Johnson/Remove%20Lower%20Unit%20a…
म3एचपी इनिन्रूड मा एक लिपअप पनि छ जो मूलतः त्यस्ता कुरा हो जुन तपाईसँग छ। तपाईं यहाँ यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou…
म दुवै किनभने carb पढेर सुझाव थियो र ignitions त समान छन्।
क्यालिफोर्नियामा ग्रान्डिडहरूसँग मजा लिनुहोस्। म विकिन्सिनमा पोखरी मिशिगनमा हुनेछु। मलाई त्यहाँको लागि एक लिङ्क पनि छ: https://www.youtube.com/watch?v=xC7QiRaJTbI&t=55s
मेरो3एचपी इनिन्रude को लागि एक नयाँ shutoff वाल्व को आवश्यकता छ। जब मैले फेला पारेँ, म तपाईंलाई थाहा दिनेछु।
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 22: 45
जवाफ को powerhead एकदम सजिलो छ ... by ttravis
Powerhead र carb
धन्यवाद। सोचमा म पहिलो कार्ब गर्न सक्छु र त्यसपछि लीकको लागि पुनः जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि पावर टाउको निलम्बन गर्नुहोस्,
ग्याँस यो प्वाल बाहिर लीक
बुझाउने ttravis मा शनि, 07 / 01 / 2017 - 02: 37
जवाफ Powerhead र carb by jwb.jw17
त्यहाँ कुनै पारी रड छ ...
त्यहाँ3र पारी अन्य मोडेल छ जस्तै त्यहाँ 5.5 हिमाचल प्रदेश कुनै पारी रड छ।
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 22: 57
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 23: 00
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 23: 08
म साँच्चै म यसको वर्ष मात्र 10 साना यो सानो इन्जिन प्रेम म र मेरो 14 खुट्टा काठ बहाव डुङ्गा पूर्ण .I'll तिमी मेरो प्रगति पोस्ट राख्न फिट भन्दा आफ्नो यो जस्तै मलाई सहयोग गर्न समय कदर ... ... म अहिले बर्नर मा धेरै कुराहरू छन्। जेरेमी
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 21: 24
ग्याँस ट्यांक र वाल्व
मैले बन्द वाल्व लीक अनुमान गरेपछि, मैले टंक हटाइयो वाल्व पुनः खसेको थियो र खनिज आत्माहरूमा खसेको थियो। म यसलाई खुट्टा खुल्ला साथ बस्न र यो लीक र वाइन संग यो अझै पनि मुश्किल देखि। आश्चर्यजनक रूपमा मात्र एक सानो सानो / ग्याँस बाहिर आयो र टोपी सुरक्षा को दुई भागहरु .कुनै पहिले यो yanked को हुनुपर्छ र यो शायद किन किन पूर्ण छाप छैन।
ग्याँस टोप सुरक्षा
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 21: 58
तपाईंको 5.5 HP मा तपाइँसँग लिङ्क लिनु भएको थियो। म यो कुनै पनि देख्न सक्दैन र त्यहाँ केवल5शिकंजाहरू छन्। त्यहाँ सिम भन्दा माथि सानो प्लेट छ जुन मैले अझै हटाइएको छैन।
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 22: 01
शक्ति टाउको अन्य पक्ष
2 प्रत्येक पक्ष र एक अन्त मा पेंच
बुझाउने ttravis मा शनि, 07 / 01 / 2017 - 02: 39
जवाफ शक्ति टाउको अन्य पक्ष by jwb.jw17
म बाहिर चोर्नु र intall थियो ...
म पछाडि छोड्छु र नयाँ प्लग तारहरू इन्कार गर्दछु। मैले ट्रयाक्टर आपूर्तिमा मेरो पार्यो। म तपाईलाई एक पटक कल लिङ्क पठाउन सक्छु जब म धेरै जागिर छु। पुरानो तारहरू लाई उनीहरूको लम्बाईको मापदण्डमा बचत गर्नुहोस्।
बुझाउने ttravis मा शनि, 07 / 01 / 2017 - 06: 57
जवाफ म बाहिर चोर्नु र intall थियो ... by ttravis
http://outboard-boat-motor-repair.com/parts/18-5225%20Spark%20Plug%20Wi… वा "18-5225" मा साइट खोज र प्लग प्रयोग
बुझाउने jwb.jw17 मा शनि, 07 / 01 / 2017 - 13: 37
ठीक छ मेरो भावनाहरु वास्तवमा। म पावर टाउको हटाउनको लागी अगाडी बढ्न जाँदैछु र त्यसपछि भागहरू क्रमान्तरण गर्न चाहन्छु ... मलाई मद्दत पुर्याउनेछु यदि मद्दत चाहियो भने फेरि दोहोर्याउनुहोस्!
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 22: 16
यो हेर्नुस् !! कसैले वास्तवमा यो सम्बन्ध (ग्याफिंग गियर) बनाएर तार सम्बन्ध र एक नली क्लैंम्पको साथ बनाउँछ र कुन कुरालाई थाहा छ, जब तीव्र स्थितिमा हिँड्छ भने तारहरू अनुहारमा पचाइएको छ किनकी यस्तो विशाल बल्ब सामग्रीद्वारा बनाइन्छ। त्यसोभए उहाँले त्यसलाई चिकन दिनुभएको छ त्यसैले यो चल्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? म यसलाई आँसु पुछिदिन्छु र अझ राम्रोसँग आउन चाहन्छु।
स्थिति N रोक्न
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 22: 18
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 22: 20
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 07 / 06 / 2017 - 14: 43
यो3/4इन्च स्थान सबै कि थियो। सेतो छैन तामा तल
जंक हटाइयो ...
बुझाउने jwb.jw17 गुरु मा, 07 / 06 / 2017 - 14: 48
शीर्ष सिलेंडर 60lbs, कम 50 हो। टाउको उठाउनेछ र ग्याँसकेट र पुनरुत्थानको आवश्यकता भएमा आवश्यक छ। यो इन्जिनको लागि अझै पनि बजिरहेको छ?
बुझाउने jwb.jw17 मा शुक्र, 08 / 04 / 2017 - 10: 40
जवाफ सङ्कुचन परीक्षण by jwb.jw17
नमस्ते ट्रेविस, मैले अन्तमा केहि समय पाएको छु यो फेरि काम गर्दछ। मैले नि: शुल्क गियर केसलाई पुनःनिर्माण गरे ... यसले मलाई3घन्टा पुरानो मुहर खोल्नको लागी! म वास्तवमा यसलाई बाहिर निकाल्न थाले पछि गियर बक्स तेलमा पानी थिएन। यद्यपि नयाँ सील र नयाँ प्रोभेलर भित्र छन्। के मलाई अनुमति दिईएको ग्याटेकेटलाई कम शरीरमा पावर टाउको घुमाउँछ? साथै यो पनि अनुमति को लागि टाउको ग्याँसकेट, ठीक छ? मैले समुद्री समुद्री इन्जिन वा2स्ट्रोक कहिल्यै गरेन त्यसैले मैले पहिले सोधें। धन्यवाद
बुझाउने ttravis मा शुक्र, 08 / 04 / 2017 - 11: 56
जवाफ JW 17 परियोजना by jwb.jw17
तपाईंको अनुमतिको दूर राख्नुहोस्! तपाई ...
तपाईंको अनुमतिको दूर राख्नुहोस्! तपाईंलाई पावरहेडलाई शरीर, वा टाउको ग्याँसकेटमा सील गर्न आवश्यक छैन।
तपाईं प्रगति गरिरहनु भएको सुन्नको लागि खुशी छ। तपाईले गरेपछि तपाई एक विशेषज्ञ हुनुहुनेछ।
बुझाउने jwb.jw17 मा शनि, 08 / 05 / 2017 - 10: 50
जवाफ तपाईंको अनुमतिको दूर राख्नुहोस्! तपाई ... by ttravis
ठीक छ धन्यवाद, म तिनीहरूलाई एक राम्रो सफा काम गर्छु। मेरो कार्ब किट यहाँ छोटो हुनुपर्छ ..मलाई लाग्छ कि सील मूल थियो, यो पीतल रंगिएको थियो, र शाब्दिक 55 वर्ष पछि वेल्डेड !! म वर्तमान सङ्कुचन 50 र 60 सँग जान जाँदैछु र आशा गर्दछु कि यो सुधारको बेला म यसलाई एकै साथमा पुग्छु। हेड ग्लासकेट, यद्यपि प्रभावकारी परिवर्तनको लागि तयार थियो र म आशा गर्दछु कि मार्वल रहस्य तेल उपचारले पङ्क्ति सील क्षमता सुधार गर्दछ। । म एक 31 मोडेल ए पिकअप थियो जुन एक खुट्टा टाउको थियो र पानीले सबै4पिस्टन धारण गर्यो। मैले टाउको हटाउनुभयो र सिलिन्डरहरू एमएमओसँग भरे। एक बिचको पछि मैले हात समातेर फ्याँकिदिएँ र एक 8 पाउन्ड स्लेज लिनुभयो र चारैतिर क्रेनमा बोकेर हिँड्ने प्रयास गरें। पहिलो दिन यो केहि इन्च र हरेक दिन एकदम बढी भयो र अन्तमा यो पूर्ण मोड भयो।3महिना पछि पछि मैले यसलाई क्रेनमा हाल्ने र यसलाई एउटा अर्को टाउकोमा थप्पटिदिएँ, यसलाई समय सकियो र यो सही सुरु भयो !!! मोडेल ए र एमएमओ को स्थायित्व को लागि एक चमत्कार र अभूतपूर्व। धन्यवाद टम, म तपाईंलाई थाहा छ कसरी यो बाहिर जान्छ।
बुझाउने jwb.jw17 मा शनि, 08 / 05 / 2017 - 22: 36
जवाफ धन्यवाद by jwb.jw17
JW17 परियोजना जाँदै मा
नमस्ते टम,5को लागी यो दिउँसो अन्तमा मेरो पसलमा काम गर्न जान्छ। कार्ब किट मेलमा आयो। पुरानो फ्लोट सुई वाल्व रबर्ट भन्दा सट्टा कुनै क्लिप र धातु टिप छैन। मैले एक समयको क्लिपको काम गर्न पाएको छु र अन्ततः यो थोपा थोपा र यसलाई स्थापित भयो। म यसको उद्देश्य उद्देश्यलाई सुत्ने साथ सुई सुत्नु पर्छ भन्ने निश्चित छ। मूल वाल्व माथि माथि कुनै नाली थिएन ... त्यसैले ज्वाला arrester र carb मा छन्, टाउको स्थापित, र पावर हेड कम शरीरमा। तपाईंको साइटमा ईनिरेन्ड मैनुअलले गियरकोस भर्नको लागी इन्जिनमा राख्नु पर्छ। मैले गरे ... प्रश्न ... ?? के मैले यसलाई सीधा सेट गर्नु पर्छ र छेदमा स्तर तल ल्याउन शीर्ष प्लग बाहिर लैजान्छ वा यो ठीक छ जस्तो छ? मैले यसलाई क्षैतिज स्थितिमा ओभरफ्लोमा भरें .म सँग पनि समाधान गर्न प्लग तारहरू छन्। म ट्यांक र वाल्व स्थापना गर्नु अघि अर्को ग्याँस वाल्व रिसाई परीक्षण गर्न पनि आवश्यक छ ... मैले वाल्वमा एकदम थोडा बन्दुक फेला पारेको छु र आशा छ कि अब यो सील हुनेछ। तपाईले नयाँ वाल्व स्रोतलाई कहिले फेला पार्नुभयो?
बुझाउने ttravis मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 08 / 06 - 2017: 12
जवाफ JW17 परियोजना जाँदै मा by jwb.jw17
रूप तल्लो अन्त तेल सम्म ...
जहाँसम्म निचला अन्त तेल हुन्छ, म सामान्यतया तेललाई माथिल्लो प्लगमा राख्छ, ऊर्ध्वाधर स्थितिमा मोटरको साथ सम्म पुग्छ जब सम्म यो बाहिर आउँदैन।
यो जस्तो देखिन्छ कि मैले ईबेमा ईन्धनको बन्द वाल्वहरू देखेको छु, तर मैले केहि समयमा मेरो3HP मा काम गरेको छैन। मलाई लाग्छ यो केवल एक मानक 1 /4इन्च तांबे वा पीतल नलसाजी टुक्रा हो। मैले निम्न खोजी गरे अमेजनले काम गर्ने कुरा हो भनेर हेर्न Amazon।
बुझाउने jwb.jw17 मा मंगल, 08 / 08 / 2017 - 10: 42
जवाफ रूप तल्लो अन्त तेल सम्म ... by ttravis
हो, मैले एक eBay मा फेला पारेँ। $ 55 !!!! विज्ञापन रूसी मा लेखिएको थियो त्यसैले म यसको पछाडी छु र म 55 रकम तिर्न चाहन्नँ। तेलले प्वाल भर्न पाउँदैन। म आज शहरमा एक हार्डवेयर भण्डारमा जाँदैछु जुन मैले कहिल्यै आवश्यक छ ... यो यो एक हुन सक्छ एक पटक हुन सक्छ।
बुझाउने पिट्स आरजीएक्सएनमक्स। गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 10: 30
1956 जनसन ट्यांक रूपान्तरण
शुभ बिहान- मैले मेरो 1956 5.5hp मा ट्यांक रूपान्तरण परियोजना पूरा गरेको बारेमा मात्र गरेको छु। म सही ईंधन लाइन / वैक्यूम रेखा संग समस्याहरूमा हिडिरहेको छु। क्या तपाईं मलाई सही आकार को उपयोग मा बता सकते हो, मलाई तीर हात र नली को माध्यम ले यसलाई खिलाने को आवश्यकता हो। म मोटी छ।
बुझाउने ttravis गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 11: 22
जवाफ 1956 जनसन ट्यांक रूपान्तरण by पिट्स आरजीएक्सएनमक्स।
प्रयोग इन्धन लाइन ...
जॉनसन / इनिन्रूड द्वारा प्रयोग हुने ईन्धन लाइन या तो3/ 8 वा5/ 16 इन्स व्यास भित्र (आईडी) हो। यो केवल सामान्य ईन्धन लाइन हो जुन तपाईं कुनै पनि मोटर वाहन भाग स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ एक लिङ्क हो जहाँ तपाईं Amazon.com मा5/ 16 ID5फुट लाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
यहाँ 1 /4इन्च आइडी5पैर लाइनको लागि लिङ्क छ:
बुझाउने पिट्स आरजीएक्सएनमक्स। गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 12: 02
जवाफ प्रयोग इन्धन लाइन ... by ttravis
धन्यवाद। मैले केहि 1 /4किनेँ तर तर यसलाई तल तल्लो तहको माध्यममा मार्गनिर्धारित गर्न सकेन जहाँ दुई लाइन प्रणाली थियो। यो साइटमा तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको रेखा जस्तो देखिन्छ जस्तो महान् मोटो छ तपाईं कसरी तीर हातमा माउन्ट गर्नुभयो?
बुझाउने पिट्स आरजीएक्सएनमक्स। गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 12: 06
जवाफ इन्धन लाइन by पिट्स आरजीएक्सएनमक्स।
को cowling तल
बुझाउने ttravis गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 22: 14
जवाफ को cowling तल by पिट्स आरजीएक्सएनमक्स।
मेरो प्रोजेक्टमा मैले मोटर लाइनमा एकल लाइन ईन्धन कनेक्टरको साथ दुई लाइन ईन्धन कनेक्टरलाई प्रतिस्थापित गरें। मैले मोटर ईण्डको तलबाट वा तल ईन्धनको नली चलाएको थिएन।
मैले Amazon.com मा यो फेला परेन, तथापि, तिनीहरूसँग ईबेमा केही छ। खोजी गर्नुहोस्
"393334 ईंन्धन कनेक्टर"
बुझाउने Newt6522 मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 08 / 13 - 2017: 17
ग्याँस हुदै छैन
मसँग एउटा 1956 QD-17 10 ह्याण्डसेभर म ईन्धन पाइरहेको छैन। म चकित छु र म बास्केटबल बल्ब मा ईंन्धन प्राप्त गरिरहेको छु तर यो मैले कार्बो बिर्सिएको छ र विमानहरू सफा छन्। कुनै सुझावहरू
बुझाउने ttravis सोम मा, 08 / 14 / 2017 - 00: 24
भ्रमणको लागि धन्यवाद। तपाई ...
भ्रमणको लागि धन्यवाद। तपाईंसँग राम्रो प्रश्न छ।
कार्ब अफ Wiith, इन्फेस Manafold मा आफ्नो औंला वा हथेली राख्नुहोस् र स्टार्टर रस्सी खींच्नुहोस्। तपाईले यो बिन्दुमा सक्कली महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। यदि होइन भने, रेड वाल्वहरू जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं manafold मा सक्शन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कार्ब ग्यास्केटहरू एयर तंग हुनुहुन्छ। सानो लेक एक पल मा एक पिन भित्री जस्तै छ। यसले कार्ब ईन्धन र हावा मा आकर्षित नगर्ने कारण हुनेछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग नयाँ छ कार्ब किट जब तपाईं कार्ब फिर्ता एक साथ राख्नुहुन्छ। फ्लोट सुई वाल्व जाँच गर्न पनि सक्छ।
भाग्यले साथ दिओस्,
बुझाउने Timreimens सोम मा, 08 / 14 / 2017 - 22: 46
3hp आउटबोर्ड पुनर्वास गर्ने सबै महान जानकारीका लागि धन्यवाद टोम। मैले मेरो पहिलो डुङ्गा मोटर, एक 1964 इनिनराइड 3hp योचविन $ 60 को लागी किन्नु भएको थियो जुन एकदम राम्रो ओभरहाल को आवश्यकता थियो। सौभाग्य देखि कार्बोरेटर को हेरचाह गरिएको थियो, तर यो धेरै आवश्यक पर्दछ। बिन्दुहरू र कन्डेनसर ठीक देखिन्थ्यो तर तार तारहरू जस्तै कुकुरहरू खराब थिए। सिलेंडर टाउको आवरणले पानीको जैकेटमा घिमिरे एक अंतर थियो र निकास कवर प्लेटमा धेरै प्वालहरू खाएको थियो, तर गियरको स्थिति राम्रो थियो। मैले इग्निशन को दोबारा गरे र कार्बोरेटर को पुनर्निर्माण गर्यो र यसलाई निकाल दिए र यो राम्रो तरिकाले राम्रो डार चलािन्छ। अहिले मैले एक नयाँ प्रवर्धक र निकासको आवरण प्लेट र ग्याँसकेटको आदेश दिएँ। म बाहिर निस्कन र पानीमा प्रयास गर्न सक्दिन।
मैले दुई यूट्यूब लिङ्कहरूमा पार गर्न चाहानें जुन मैले पनि उपयोगी पाए।
(जॉन ब्राइटको) जॉनसन र इनिन्र्ड कार्ब मरम्मत 3hp 50s र 60s https://www.youtube.com/watch?v=B2bvvnotA1k
(क्याजुनकुकोन) इनिन्रूड गेल र जॉनसन इग्निशन भिडियो https://www.youtube.com/watch?v=oTN8Ag_aj-8 (लामो 7- 10 मिनेट खण्ड तर सम्पूर्ण)
टम इन मेन
बुझाउने lionel सोम मा, 08 / 21 / 2017 - 22: 04
इरिनिरेड 3.3hp 1941
मलाई लाग््छ कि त्यहाँ दुवै को बीच कुनै पनि परिवर्तनीय भागहरु छैनन्। यदि 1941 जॉनसन 3.3 HP चलाउँछ भने, ईन्धन रेखालाई बदल्नुहोस् र यसको मजा लिनुहोस्। त्यो पुरानो मोटर को लागी केहि भागहरु लाई खोज्न मुश्किल हुनेछ। इनिन्रूडले अब यसलाई समर्थन गर्दैन, र सेरा समुद्रीले पुरानो मोटरका लागि भागहरू गर्दैन। पुरानो आउटबोर्ड साईटहरू र साथै google जहाँ तपाइँ भागहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले धेरै वर्षसम्म मोटर चलाए।
तपाईंको 1958 जॉनसन 3.0 HP JW-14 थियो र अझै पनि एक लोकप्रिय मोटर हो। त्यहाँ धेरै भागहरू उपलब्ध छन्। यहाँ एक लिङ्क हो जसले सामान्य भागहरू सूची गर्दछ।
म यो ठीक छ कि चलिरहेको र दौड्न प्रयास गर्न को लागी राम्रो छ।
म 1941 छ 3.3hp र एक 58 'जॉनसन 3hp evinrude।
त्यहाँ कुनै उपयुक्त / विनिमययोग्य भागहरू छन्?
3.3 एचपी चलाउँछ तर ईन्धन लाइन लीक र 3h ले रिसाई वा रन गर्दैन।
बुझाउने lionel मा शुक्र, 08 / 25 / 2017 - 10: 35
जवाफ इरिनिरेड 3.3hp 1941 by lionel
म तपाईंलाई थाहा छ कि के हुनसक्छ यद्यपि यो थोडा हुन सक्छ।
बुझाउने Cliffjohnsen मा शुक्र, 08 / 25 / 2017 - 17: 04
म मछुआरे 5.5 छ ...
म मछुआरे 5.5 1956 छ। नयाँ coils र अंक सबै राम्रो देख्न। बिन्दुहरू खुल्ला छन् वा बन्द हुन्छ। म यो सही छ भनेर सोच्दैन। कुंडल र कन्डेनसर तारको साथ, तिनीहरू ग्रस्त छैनन्
कुनै सुझावहरू? दुवै coils हरी तार देखि प्लग गर्न 8ko परीक्षण। स्पार्क आन्तरिक छ।
बुझाउने ttravis मा शनि, 08 / 26 / 2017 - 01: 01
जवाफ म मछुआरे 5.5 छ ... by Cliffjohnsen
कस्तो प्रतिरोधता पढ्ने गर्छ ...
तपाईं कन्डेनसेन्सरमा कस्तो प्रतिरोधको पढाइ गर्नुहुन्छ? यो उच्च हुनुपर्दछ। केही चित्रहरू मद्दत गर्थे।
बुझाउने Xavier56 Wed, मा, 08 / 30 / 2017 - 16: 56
जॉनसन 5.5 एचपी सीडी-एक्सएनएक्स - कुनै स्पार्क छैन
मसँग कुनै स्पार्कको साथ जॉनसन 5.5 एचपी सीडी-एक्सएनक्सक्स छ। ब्याक राउन्डमा मैले यो मोटर चलिरहेको छैन र अरू कसैको मरम्मत गर्न थाल्नुभयो। तिनीहरूले दुई नयाँ कोइलहरू, कन्डेनसेर्स र बिन्दुहरू स्थापना गरे। बताउन सकिएन भने स्पार्क प्लग तारहरू निश्चित रूपमा क्यापहरू नयाँको लागि प्रतिस्थापित भए, तारहरू उत्कृष्ट अवस्था देख्छन्। त्यहाँ कुनै स्पार्क छैन, यदि तपाईं प्लग राख्नुहुन्छ भने मामलामा कमजोर स्पार्क पनि। मैले यो देखेको छु र कुनै पनि समस्या पाउन सक्दिन। मैले 20 पढेको छु954-1964 ईनिरेड 5.5 एचपी ट्युन-यू परियोजना इग्निशन प्रणाली ट्युन-माथि। तस्विरहरु मा हेरे र केहि कुरा स्थापित गलत थियो कि हेर्न कोसिस गरे। पुन: पत्ता लगाइएको ग्याप ठीक थियो। म भेट्टाउन सक्दिनँ। तस्बिर खिच्यो र ट्युन माथि चित्रको तुलनामा केहि फरक नदेखाउनुहोस्। मैले कुनै चक्करको साथ देख्न सकेन तर दुबै। कुनै पनि मद्दतको सराहना गरिनेछ।
बुझाउने ttravis सोम मा, 09 / 04 / 2017 - 12: 17
जवाफ जॉनसन 5.5 एचपी सीडी-एक्सएनएक्स - कुनै स्पार्क छैन by Xavier56
म ओम मीटर लिनेछु ...
म ओम मीटर लिन चाहन्छु र कन्डेन्सरहरू र कोइलाहरू परीक्षण गर्नेछु। साथै, यदि तपाइँसँग ग्रिड वा कनेक्टिविटी समस्या छ भने हेर्न स्पार्क प्लग तारहरू जाँच गर्नुहोस्।
बुझाउने VintageRuns सोम मा, 09 / 04 / 2017 - 09: 59
नमस्कार: मैले भर्खरै एक आंशिक रूपले असंगत 1965 3hp जॉनसन खरिद गरे तर पानीको ट्याब्लेट पुन: स्थापना गर्न समस्या भएको छु। त्यहाँ पानीको ट्यूबको मोटर विधान अन्तमा एउटा सानो प्लास्टिक "कोष्ठक" छ ... तर मैले हेर्न सक्दैन कि यो अन्त मोटर असेंबलीमा स्थापना गर्ने। के मलाई यो पानीको ट्यूब पुन: स्थापना गर्न स्तम्भबाट मोटर विधान हटाउनुपर्छ।
कुनै सल्लाहको स्वागत गरिनेछ।
बुझाउने ttravis सोम मा, 09 / 04 / 2017 - 12: 20
जवाफ 1965 3hp जॉनसन by VintageRuns
मैले मेरो3HP मा काम गरेको छैन ...
मैले केहि समयको लागि मेरो3HP मा काम गरेको छैन त्यसैले मलाई सम्झना छैन कि त्यो कसरी काम गर्दछ। मलाई त्यहाँ केहि यूट्यूब भिडियोहरू छन् जुन तपाइँले के खोजिरहनुभएको छ, वा सम्भवतः कसैलाई जसले पावरहेड गरेको छ हालमा चिनामा भित्र र तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ।
बुझाउने mdm मा शुक्र, 09 / 15 / 2017 - 15: 12
म 53 3hp जॉनसन पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। के म केहि बोल्न मा प्रयोग गर्न को लागी जंग को कम गर्न को लागी, जस्तै चिकन या लकटाइट आदि? निचो शाफ्ट मा जोडहरु संग एक नै छ?
बुझाउने ttravis मा शनि, 09 / 16 / 2017 - 00: 03
जवाफ 3hp जॉनसन by mdm
मैले सँधै अनुहार हेरें ...
मैले सँधै बोल्टमा अनुहार राखें, खासगरी जब फरक धातुहरू हुन्छन्। तपाई आफैंलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ अर्को पटक तपाई बोल्ट हटाउनुभयो। गन्दा, तर राम्रो सामान। https://www.amazon.com/Permatex-80078-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B0…
बुझाउने 19evinridelvr58 Wed, मा, 10 / 04 / 2017 - 20: 24
म यो सार्वजनिक रूपमा राख्नको लागी अपोनागजिज गर्दछु तर मैले कुनै सम्पर्क हामीलाई लिंक भेटिएन। यसका लागी, यसका लागी तपाईले तपाईलाई केहि गर्न सक्नु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई केहि गर्न सक्नु हुन्छ।
यो टाँस्दै ... साइट धेरै प्रयोगकर्ता अनुकूलन होइन .. सबै बूट गर्नुहोस्
बुझाउने ttravis गुरु मा, 10 / 05 / 2017 - 07: 58
जवाफ एक्स्टेन्सन थप्नुहोस् by 19evinridelvr58
भ्रमण र मेरो लागि धन्यबाद ...
भ्रमणको लागि धन्यवाद र म टिप्पणीहरूको स्वागत गर्दछु जुन मैले दोषी र यस साइटलाई सुधार गर्न सक्ने दोषहरू बताउँछु। मैले भर्खरै डुङ्गा आउटबोर्ड मोटरमा राखेँ कि इइन्रूड / जॉनसन / ओएमसी / बीआरपी बनाइयो र सक्रिय रूपमा प्रत्येक मोटरको लागि भागहरूको सूचीमा काम गर्दैछु। त्यहाँ धेरै टे्वीक्सहरू छन् जुन प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न चाहन्छु।
म यो देख्न खोज्दै हुनुहुने पृष्ठ कुन पृष्ठमा हुनुहुन्छ। मैले सोचेको छैन कि मसँग म्यानुअल फाइलको PDF फाइल डाउनलोड गर्न लिंक थियो। म गएँ http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou… तर मलाई थाहा छैन कि तपाईले क्लिक गर्नुभयो।
के यो सम्भव छ कि तपाईंले फाइल डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुभयो वास्तव मा स्क्रिनको नजिकैको शीर्षमा एक गुगल विज्ञापन थियो? यहाँ विज्ञापनको स्क्रिन शट हो जुन मलाई भ्रमित हुन सक्छ। मैले Google लाई माथि राख्छ कि थपमा नियन्त्रण गर्दछु, तर तिनीहरू यस साइटको लागि भुक्तानी गर्न मद्दत गर्दछु। म देख्छु कि म त्यो विज्ञापन रोक्न सक्छु किनभने म सहमत छु, यो भ्रामक हो।
म देख्छु कि म त्यो पीडीएफ फाइल फेला पार्न सक्छु र यसलाई लिङ्क राख्दछु।
बुझाउने ttravis गुरु मा, 10 / 05 / 2017 - 08: 10
जवाफ भ्रमण र मेरो लागि धन्यबाद ... by ttravis
मलाई विश्वास छ कि मैले अवरुद्ध गरेको छु ...
मलाई विश्वास छ कि मैले त्यो विशेष विज्ञापन अवरुद्ध गरेको छु। यो पहिलो विज्ञापन मैले ब्लक गरेको छु त्यसैले मैले केहि नयाँ सिके। म देख्छु कि म त्यो पीडीएफ फाइल फेला पार्न सक्छु। यो शायद पुरानो साइट मा कहीं पनि दफन गरिएको छ http://old.outboard-boat-motor-repair.com
अर्को पाना अर्को>